Godane oo Xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan Ururka Alshabaab « AYAAMO TV
Godane oo Xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan Ururka Alshabaab
598 Views Date March 5th, 2014 time 6:20 am
Wararka ka imaanaya Degmada Baraawe Gobalka Sh/Hoose ayaa sheegaya in Saraakiil ka tirsan Ururka Alshabaab xabsiga la dhigay kadib markii Hugaamiyaha Kooxda Alshabaab Axmed Godane amar ku bixiyay in la xiro.
Sida dad ku sugan Baraawe shegeen waxaa xabsiga loo tixaabay sedax sargaal oo ka tirsan Maamulka sare Alshabaab kadib markii ay diideen in ay u hugaansamaan awaamiirta hugaamiyaha sare Alshabaab Godane.
Inkastoo magacyadooda aysan noo suuragalin in aan helno ayaa waxaa la sheegay in sababta ugu weyn ee xariga keentay ahayd markii kulan shalay galinkii danbe ka dhacay Baraawe lagu kala tagay kadib isfahan waa soo kala dhaxgaly.
Hugaamiyaha Kooxda Alshabaab Axmed Cabdi Godane ayaa amar ku siiyay Ciidamada daacada u ah in xabsiga dhigaan waxaan la sheegay in arintaa khilaaf ka dhax abuurtay hugaamiyaal sar sare oo ka tirsan Ururkaa.
Ma ahan markii ugu horaysay ee Hugaamiye Godane uu xiro saraakiil sar sare oo ka tirsan Alshabaab waaxa uuna hore u xiray saraakiil badan qaar kalina waa uu dilay halka kuwa kalina uu ku raad joogo.